अर्थमन्त्री खतिवडाले भेटे भारतीय वित्तमन्त्री, प्रतिवन्धित नोट साट्न आग्रह – Nepal's No. 1 News Portal, Business News, Tourism News, Sports News, Entertainment News, Tourism Year 2020, digitalkhabar.com …express media network
Home / अर्थ समाचार / अर्थमन्त्री खतिवडाले भेटे भारतीय वित्तमन्त्री, प्रतिवन्धित नोट साट्न आग्रह
अर्थमन्त्री खतिवडाले भेटे भारतीय वित्तमन्त्री, प्रतिवन्धित नोट साट्न आग्रह
By digitalkhabar on १७ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०८:१७
१७ असोज, काठमाडौं । भारतमा जारी विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणबीच शुक्रबार भेटवार्ता भएको छ । भारतीय वित्त मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालमा ठूलो परिमाणमा रहेका ५ सय र एक हजारका भारतीय नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
भारतले कालोधनविरुद्ध कारवाही गर्ने भन्दै एकाएक ५ सय र एक हजार भारुका नोट प्रतिवन्धित गरेको थियो । सो प्रतिवन्धपछि उसले आफ्नो देशका नागरिकसँग रहेका ती नोट सटही गरे पनि नेपालमा रहेको ठूलो परिमाणको नोट साट्न इन्कार गर्दै आएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराए । साना विकास अनुदान आयोजना, हुलाकी सडक, एकीकृत चेक पोष्टको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत दुई अर्थमन्त्रीबीच छलफल भएको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडमा भारतीय लगानीकर्ताबाट समेत इक्विटीमा लगानी गर्न प्रकृया अघि वढेको जानकारी दिंदै सो कार्य अघि वढाउन अर्थमन्त्रीले मारतीय समकक्षीसँग आग्रह गरेका छन् ।
Related ItemsBusinessDigital KhabarEconomicsIndiaNepal
← Previous Story सुनको मूल्य ११ सय रुपैयाँले बढ्यो